नेपालमा छोटो अवधिमा धेरै संक्रमितको मृत्यु हुनुको कारण के ? किन यति धेरै संक्रमितको मृत्यु भयो ? – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा छोटो अवधिमा धेरै संक्रमितको मृत्यु हुनुको कारण के ? किन यति धेरै संक्रमितको मृत्यु भयो ?
यी हुन् त्रिशुलीमा जिप ख´स्दा हरा´इरहेकी ११ वर्षीया बालिका जेनिसा